Vavolombelon’​i Jehovah any Oseania
MPONINA 41 051 379
MPITORY 98 574
FAMPIANARANA ­BAIBOLY 67 609
Nanaiky ilay mpampianatra rehefa afaka sivy taona
Nanasa ny mpampianatra azy hamonjy Fahatsiarovana i Olivia, any Aostralia, tamin’izy tany amin’ny akanin-jaza. Nanasa azy foana izy taorian’izay, nandritra ny valo taona. Tapa-kevitra ny hanatrika Fahatsiarovana ilay mpampianatra tamin’ny 2016, dia nitelefaonina an’i Olivia. Tena faly, hono, izy hoe nanasa azy i Olivia isan-taona. Tonga tany amin’ny Fahatsiarovana àry izy sy ny vadiny. Mbola tsaroan’ilay vadiny ny nanorenana ny Efitrano Fanjakana tao amin’ilay tanàna. Niasa tao amin’ny filan-kevitry ny tanàna mantsy izy tamin’izany. Nolazainy tamin’ireo rahalahy fa tena niaiky izy hoe voalamina tsara ilay tetikasa. Nahafinaritra azy mivady ny Fahatsiarovana, ary anisan’ireo niala farany tao ry zareo.
Aostralia: Nisy vokany ny fikirizan’i Olivia, rehefa afaka sivy taona
Intelo namaky an’ilay boky izy
Mipetraka any Timaoro Atsinanana i Jacintu sy ny vadiny, ary Katolika hiringiriny. Gaga be ry zareo rehefa lasa Vavolombelon’i Jehovah ny zanaky ny zokiny, ary tsy nandeha nivavaka niaraka tamin’ny fianakaviany intsony. Tian’i Jacintu hoporofoina hoe diso lalana ilay zanaky ny zokiny, dia nanapa-kevitra izy fa hamaky an’ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? Te hitady fampianaran-diso tao anatin’ilay boky izy. Nilaza tamin’ny vadiny izy tatỳ aoriana hoe: “Efa voavakiko ilay boky, fa tsy mahita hokianina aho.”
Dia hoy ny vadiny: “Tsy novakinao tsara izay ilay izy. Vakio indray, dia vakio miadana.”
Namaky an’ilay boky indray àry i Jacintu, ary nilaza tamin’ny vadiny hoe: “Tsara daholo ny ao anatin’ilay izy e! Avy ao amin’ny Baiboly ny zavatra rehetra voalaza ao, na dia ny momba ny fivavahana amin’ny razana aza.”
Dia hoy indray ny vadiny: “Vakio fanintelony àry e. Dia ianaro tsara. Tsipiho mihitsy ny fehintsoratra. Tsy maintsy misy diso ao.”
Dia izany indray no nataon’i Jacintu. Rehefa voavakiny fanintelony ilay boky, dia niteny izy hoe: “Marina daholo ny voalazan’ilay izy e! Tsy diso lalana ny zanaky ny zokiko.” Mianatra Baiboly izao i Jacintu.
Ny zanany vavy no nahatonga azy hianatra
Nitsidika vehivavy avy any Pohnpei ny anabavy mpisava lalana iray mipetraka any Guam. Nasehony azy ilay video hoe Nahoana Ianao no Tokony Hianatra Baiboly? ary nilaza izy fa hitsidika azy indray. Niverimberina tany izy, fa tsy nety nahita azy. Ny zanak’ilay vehivavy no hitany indray mandeha, dia nampisehoany video iray avy ao amin’ilay hoe Ataovy Namanao i Jehovah. Tiany be ilay izy. Tao ilay vehivavy rehefa niverina indray ilay anabavy, ary nihaino tsara. Hay nilaza taminy ilay zanany hoe tokony hivavaka any amin’ny fiangonan’ilay vehivavy nampiseho video ry zareo. Izay no nahatonga an’ilay vehivavy ho liana. Nasehon’ilay anabavy azy ny fomba fianarana Baiboly, dia nifanao fotoana ry zareo mba hanohizana an’ilay fianarana.
Hoatran’ny “ondry tsy misy mpiandry” izy ireo
Nankany Inakor, faritany mbola tsy misy mitory any Papouasie-Nouvelle-Guinée, ny mpiandraikitra ny faritra atao hoe Terence sy Stella vadiny. Hoy i Terence: “Naheno olona nandondòna tao aminay izahay, tamin’ny andro voalohany nanompoanay tany. Vao maraina be tamin’izay ary mbola natory izahay. Hay efa feno olona niandry anay tao ivelany. Nitory tamin-dry zareo izahay nanomboka tamin’ny 6 maraina ka hatramin’ny 12 antoandro. Nijanona izahay avy eo dia nandro, nefa efa nisy olona be dia be indray niandry anay. Dia nitory indray izahay nanomboka tamin’ny roa ­tolakandro ka hatramin’ny misasakalina.” Nanapa-­kevitra hiainga vao maraina izy mivady ny ampitson’iny dia hamonjy toerana hafa. Nisy olona be dia be tonga indray anefa tany amin-dry zareo, fa efa lasa ry zareo. Hoy i Terence: “Rehefa fantatr’izy ireo hoe lasa izahay, dia nanaraka anay ry zareo, ary nahita anay ihany. Nitory tamin’ireo olona ireo izahay hatramin’ny 12 antoandro. Rehefa nody indray izahay, dia efa nisy olona ­niandry anay tao. Hoatr’izany foana isan’andro! Hoatran’ny ‘ondry tsy misy mpiandry’ ny olona any.”—Mat. 9:36.
Papouasie-Nouvelle-Guinée: Tsindrin-daona ny olona niandry an’i Terence sy Stella
Nitondrany fanomezana ilay mpanotra
Narary ny tanan’i Agnès, mpisava lalana any Nouvelle-Calédonie, dia nankany amin’ny mpanotra izy. Sady nanotra an’i Agnès ilay vehivavy no nilaza hoe be dia be ny olona hitany mijaly ka mieritreritra izy hoe hoatran’ny ratsy fanahy be Andriamanitra. Afaka niaro an’i Jehovah i Agnès tamin’izay, ka nisaotra azy tany am-pony. Nasehony an’ilay mpanotra ilay taratasy mivalona hoe Tsy Hijaly Intsony ve Isika Indray Andro Any? ary novakiny taminy ny Apokalypsy 21:3, 4.
Hoy ilay mpanotra: “Hoatran’ny tsisy an’io andinin-teny io ny Baiboliko. Filazantsara ihany no ao.” Fantany avy eo hoe Vavolombelon’i Jehovah i Agnès, dia nilaza izy fa efa nahita Vavolombelona tamin’izy tany Silia. Avy any mantsy izy.
Tadidin’i Agnès hoe nisy tatitra momba an’i Silia tao amin’ny Tele JW. Nitondra tablette àry izy rehefa niverina tany, dia nasehony an’ilay mpanotra ilay video. Faly be ilay vehivavy nahita ny Betela sy ny Efitrano Fivoriambe any Silia. Hoy i Agnès: “Misy fanomezana hafa ho anao ity: Baiboly manontolo. Amin’izay ianao afaka mamaky ny Apokalypsy 21:3, 4, ilay novakiko taminao iny.” Tonga dia nitsangana ilay vehivavy dia namihina an’i Agnès, sady niteny hoe: “Misaotra betsaka fa tsara be ny fanomezana anankiroa nomenao an’ahy.”
Nouvelle-Calédonie: Nihetsi-po be ilay mpanotra
Nitondran’i Agnès an’ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? izy tatỳ aoriana, ary nohazavainy bebe kokoa taminy hoe nahoana isika no mijaly. Nilaza ilay vehivavy fa hanao vakansy any Silia, dia hoentiny ilay boky ary hovakiny hatramin’ny farany.